Wasiir Ciilmooge oo diiday inuu ka hadlo xaalada Kismaayo -Idaacad uu siiyay Madoobe.
Topnews:-Wasiir Ciilmooge oo diiday inuu ka hadlo xaalada Kismaayo -Idaacad uu siiyay Madoobe.
05 April 2013 Waagacusub.com-Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Abdullahi Hersi Ciilmooge oo ka hadlayay sanadguuradii aasaaska TV-ga Qaranka ayaa ku dheeraaday sidii Hayadaha Samafalka ka shaqeeya Soomaaliya loola xisaabtami lahaa maadaama uu Dalku ka baxay Kumeel gaarkii,Arintaan uu ka hadlay Wasiirku ayaa ah hawshii wasaaradda Arimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka. Wasiirka Warfaafinta Ciilmooge oo awood qeybsiga Wasaaradda Warfaafinta ku metela qabiilkiisa Ogaadeen ,ayna isku beel yihiin hogaamiyaha Jabhada RaasKambooni Ahmed Madoobe ayaa khudbadiisa marna uga hadal damaca waalida iyo sharci darada ku dhisan ee Kismaayo.
Waftiyaddii dawladdu u dirtay magaalada Kismaayo ayaa dhamaan gacmo maran kala soo laabtay Kooxda uu hogaamiyo Ahmed Madoobe ee ay Kismaayo ku ilaaliyaan Ciidamada Dalka Kenya oo ka mida AMISOM.
Wasiirka Warfaafinta Ciilmooge oo ka mida Wasiiradda ugu musuqmaasuqa iyo qabyaalada badan Xukumadda Federalka ayaa shaki badan laga bixiyay sababta uu afka uga xirtay xaalada Kismaayo,iyadoo la ogyahay inuu Idaacad FM ah ugu deeqay Jabhada Ahmed Madoobe ee awooda Amisom ku joogta Kismaayo. Wasiirka Warfaafinta ayaa shacabka Soomaaliyeed sugayaan inuu mawqifka dawladda ku hadlo, kuna celceliyo sida umadda Soomaaliyeed uga soo horjeedo caqabadahaan loo dhigayo Dawladda Soomaaliya.